Jwxo-shiil, oo Cukurada Ka Jabay, Calaacalna Laga Soo Daayey – Rasaasa News
Jwxo-shiil, oo Cukurada Ka Jabay, Calaacalna Laga Soo Daayey
Jul 24, 2010 Jwxo, Jwxo-shiil
Warar hoose oo aanu ka helay magaalooyinka London iyo Minneapolis ee cariga Ingriiska iyo Maraykanka, ayaa waxay sheegeen, in Jwxo-shiil, uu soo food saaray jahawareer, uuna eedayn aan caadi ahayn ku hayo kuwii hore ula shaqayn jiray.
Ina Ismaaciil iyo duraan ayuu eedayn aan caadi ahayn u jeediyey isaga oo leh bohol baad iiga talaabsateen, waxaadna i siiseen dalo xumo dib ugu soo noqotay aniga iyo beeshayda. Labada nin ayaan iyagu siin wax jawaab ah, una arkay nin khalkhalay oo aan kolkii horeba cagligiisa Isticmaalin.
Wararka ayaa sheegaya in uu cawo iyo maalinba ku cel celinay calaacal isaga oo leh “hebel baa sirtayda bixiyey iyo hebel baa sirtayda bixiyey.”
Jwxo-shiil, ayaa sida la sheegay waxaa uu eed iyo canaan kula dul dhacay Cibaado Xirsi Mahad, tolow ma waa haween buu isleeyahay oo canaantaada iskama celin karto, maxay ku galabsatay gabadhu canaantu ma iyadaa guul darada keentay, mise arimo kale ayaa jira?
Cibaado ayaa kolkii uu canaantay iyaduna iska celisay iyada oo tidhi “ha i canaan ee xishoo, adigaa dad cunaa noqday oo lagaa cararaye.” Sidaasi ayey Cibaado uga tagtay kooxdiisa, wayna diiday in ay wax xidhiidh ah la soo sameeyaan ergo Jwxo-shiil ka socota.
waxaa la filayaa in uu gabadha ku maagay warar sir ah oo dhawaan lagu soo qoray bogga Xaajo.com oo ku saabsanayd e-mailo sir ah oo ku saabsan dilkii Liqoowe Muxumed Tayse, oo si aan dafiraad lahayn uu dilkiisa Jwxo-shiil uga dambeeyey.
Qoyska Liqoowe ayaa baadhid dheer oo ay sameeyeen waxay helleen in Liqowe ay dilleen saddex nin oo ay isku qoys yihiin Jwxo-shiil, nimankaas oo la helay magacyadooda. Waxay nimanka dilka gaystay ahaayeen dad degan degaanka agagaarka magaalada Qabridahare.
‘Dhinaca kale, Jwxo-shiil ayey dhamaan dadkii taageeri jiray ka dhaqaaqeen iyaga oo arkay in uusan Jwxo-shiil wadin dan Jwxo, balse uu wado oo kaliya in uu cimriga iskaga celiyo inta uu nool yahay kuna waxyeeleeyo dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Jwxo-shiil, ayaa caawa cidla gawriira oo ay xaaladiisu ku sugan tahay “Sumalow Ido seeg oo Riyo seeg oo dhexdooda uun Salbabaqlee.”
Africa: Over Half of African Countries Are Likely to Fail to Meet the 2015 Deadline for the Transition to Digital Broadcasting
Jwxo-shiil: Qawaaniinta Aduunka Ayaad Meel Kaga Dhacdeen, Hadaadd BBC-da, Tihiin